8 quán kem ngon Sài Gòn rẻ giúp bạn "tan biến" cơn nóng mùa hè | Excitinghochiminhcity - Excitinghochiminhcity.Vn
8 quán kem ngon Sài Gòn rẻ giúp bạn “tan biến” cơn nóng mùa hè | Excitinghochiminhcity
Zhizha muSaigon nguva dzose rinotinetesa nekuda kwezuva rinopisa zvakanyanya. Asi iwe unogona kurova zvachose kupisa kwezhizha ne8 Super inonaka Saigon ice cream shopu, inoyevedza. Ngati Digiticket Ngationei kuti ndeapi mazita anonakidza.
1 1. Baskin Robbins
2 2. Kokonati ice cream Codonut
3 3. Haagen Dazs
4 4. YOGREEK VN – Greek Yogurt Ice Cream
5 5. Coco Deli
6 6. FUWAGORI Cotton Cream
7 7. Swensen’s
8 7. COCO MANGO
9 8. Bui Vien Coconut Sticky Ice Cream
Kero: system view here
Maawa ebhizinesi: 10:00 – 22:30
Reference mutengo: anenge 99,000 VND
Kana iwe uri fan yeaizikirimu, unozonzwisisa kuti sei Baskin Robbins riri zita rekutanga muDigiticket runyorwa rwezvinonaka zveSaigon ice cream zvitoro. Iyo ice cream brand yakatanga kubva kuUS uye yave yakajairika kune vechidiki veSaigonese kusvika zvino.
Baskin Robbins ice cream inoratidzirwa nekusafanira kunyoroveswa kubva muchando, saka zvinotora nguva yakareba kuti inyauke. Iro cream ine kuravira kwakasimba. Hazvina mhosva kuti unodya flavour yakaita sei semuchero kana chokoreti, yoghurt, sinamoni, zvese zvinonaka zvakajairwa uye zvakajeka.
Panyaya yemutengo, Baskin Robbins ice cream haina kudhura, asi kana iwe ukadya chipunu chekutanga, unofanirwa kubvuma kuti ‘yakakosha mari’.
Parizvino, iyi Saigon ice cream shopu ine mukurumbira ichangobva kuburitsa maviri matsva eice cream, Da Lat Butter Ice Cream uye Yana Nep Cam Ice Cream:
Enjoy Yakanakisa avocado ice cream muSaigon, Baskin Robbins ndiyo yakangwara sarudzo. Butter cream yakapfuma neavocado smoothie pazasi uye cream pamusoro. Toppings dzakasiyana senge longan, coconut, chibage uye kunyanya kune yakakura hombe mafuta flan pasi.
Yana Nep Cam ice cream inoyevedza nemupunga wayo wakapfava uye unonamira. Iyo yakareruka yoghurt chikamu chakasanganiswa nekrimu, inonaka cream haisi chinhu chinonaka. Pazasi panewo keke hombe, rine mafuta eflan. Ichi chikafu chakakosha kuedza muzhizha rino.
2. Kokonati ice cream Codonut
Kero: 14 Pham Hong Thai, Dunhu 1, Guta. Ho Chi Minh
Maawa ebhizinesi: 09:00 – 24:00
Reference mutengo: 38,000 – 45,000 VND
Coconut ice cream Codonut is a Inonaka uye yakachipa ice cream shopu muDunhu 1 Kunyangwe Saigon akazvarwa kwenguva yakareba, kupisa kuchiri ‘kutonhora’. Nokuti, kuravira kunonaka kusingadzivisiki kwakwezva mweya yakawanda yevapindwa muropa neaizikirimu.
Iko kuravira kwekokonati ice cream pano inogara ichidiwa nevechidiki vakawanda uye kana ukangoidya, iwe uchave wakapindwa muropa nekusingaperi. Coconut cream zvose zvinonhuhwirira uye zvakatsetseka. Kuravira kweaizi cream hakusi kutapira, kunzwa hakuna kufanana nemamwe mazaya echando. Iice cream inotsvedzerera, kwete chando. Chinhu chinonyanya kukosha ndechekuti ice cream inotapira, kwete mafuta akawanda kana kutapira. Asi, kuravira kunotonhorera sekunwa mvura yekokonati.
Codonut ine inonaka “Pearl Coconut Ice Cream” iyo iri kuita mafashama. Iko kuravira kwekokonati cream kunonaka, tisingatauri. Kunyanya iwo akanyanya mafuta uye anochinjika ekokonati mukaka maparera akashumirwa nemhando yepamusoro, inonaka kwazvo. Kuravira kwekrimu yakasanganiswa nemafuta asi inotapira mukaka wekokonati ndeyechokwadi.
Kunze kwezvo, ice cream inosanganiswawo nemupunga unonamira kuti udye zvakanyanya “chii uye icho”. Mupunga unonamira une ruvara rwegirinhi nepepuru unofamba zvakanaka nechando ice cream. Nzvimbo yeresitorendi ine toni dzakanaka chena. Iyo resitorendi yakanyatsoshongedzerwa nemhepo inofefetera uye sevhisi inokurumidza kwazvo. Iyi ichava yakakodzera Saigon ice cream shopu yezuva rako rezhizha.
1. Ground floor Landmark 81 (pamukova weDior – Uniqlo)
2. 20 Le Thanh Ton, Dunhu 1
3. L1-26, 772A Dien Bien Phu, Dunhu reBinh Thanh
4. 5FC – 18, Crescent Mall, District 7
Maawa ebhizinesi: 8:00-22:00
Reference mutengo: 100,000 – 220,000 VND
Hunhu uye kuravira kweHaagen Dazs ice cream haidi sumo, munhu wese anoziva kuti inonaka sei. Izvi zvinogona kunzi i ice cream brand inorondedzerwa se ‘noble’. Ice cream pano haisi kungonaka chete, asi marongerwo acho zvakare ‘inonaka’. Inonaka uye ine cream yakanyanya kuravira. Kunyangwe kuravira kwacho kunotapira kana kuvava, kunonyatsojeka.
Imwe yeakanakisa ice cream yaunofanirwa kuedza ndeye Chocolate Bomb. Izvi zvinogona kutorwa sechikafu chisina kujairika chinonetsa kuwana nekuti handi pese pese panonaka sepano.
Bhomba reChocolate rakaumbwa sebhora rechokoreti. Paunenge uchishumira, isa chokoreti inopisa yakanyunguduka pamusoro. Bhara rechokoreti richanyunguduka uye roratidza ice cream mukati. Kuravira kunorwadza kwechokoreti kunosimbisa kunaka kwe ice cream.
Iwe unogona kusarudza zvakasununguka kunhuhwirira kweaizi cream mukati maererano nezvaunoda. Zvimwe zvezvinonaka zvinozoita kuti ufure kubva pachipunu chekutanga Pina Colada (kokurara), Lime Mojito (inotapira uye inovava) uye inozorodza Cantaloupe ice cream.
Kuri kupisa muSaigon, asi kugadzira aizikirimu kwakasununguka uye kwakanyanya “kofi”. Usarasikirwa nechitoro chinonaka cheaizikirimu muSaigon seizvi.
4. YOGREEK VN – Greek Yogurt Ice Cream
Kero: 98 Xuan Thuy, Dunhu 2, Guta. Ho Chi Minh
Maawa ebhizinesi: 12:00 – 21:00
Reference mutengo: nezve 45,000 VND / muti
Pane chero aizikirimu yaunogona kudya zvakanaka pasina kunetseka nezve ‘kutyora chimiro chako’? Kana iwe uri kushamisika, mhinduro ndeye Yogreek Greek Yogurt Ice Cream. Iyi mhando yatove nemukurumbira weGreek Yogurt, asi kana zvasvika kune ice cream, inofanirwa kuzivikanwa se ‘yepamusoro pepamusoro’.
Ice cream pano inowedzerwa nemukaka, saka inonaka uye yakasviba kupfuura yepakutanga ice cream. Greek yoghurt ine chinhu chakanyanya kukosha, kwete mvura, gobvu uye inochinjika, saka kana yakasanganiswa neaizikirimu, inonaka zvirinani. Chitoro chine nzvimbo diki, saka inonyanya kukodzera kutenga uye kutora.
Chikafu chinopisa cheiyi chinonaka cheSaigon ice cream shop ndiyo Caramel Coco Palmstick uye Choco Stick inonaka. Plain Greek yoghurt inofanirwa kuve yakavava zvishoma asi ine hutano hwakanyanya. Cream inonaka nemafuta mashoma emukaka mutsva. Iko kune zvakare topping, inova yakanyanya crispy crunchy yakaomeswa shredded kokonati. Kana iwe uchida kudya heathy ice cream usinganetseki nemafuta, unogona kuedza iyi ice cream shopu ipapo.
5. Coco Deli
Kero: 137 Dinh Tien Hoang, Da Kao Ward, Dunhu 1, Guta. Ho Chi Minh Guta
Maawa ebhizinesi: 10:00 – 22:00
Reference mutengo: 29,000 – 60,000 VND
Coco Deli inonaka ice cream shopu muSaigon ine super yakasarudzika uye inoyevedza kokonati ice cream. Ice cream paCoco Deli haingonaka chete asiwo yakachipa, saka iyi ishopu yeice cream chaiyo yausingakwanise kupotsa.
Imwe sevhisi yeaizikirimu inosanganisira 3 makapisi e49K. Kana iwe uchida kudya zvakanyanya, wedzera 10K. Iyo cream yakanyanya ‘smooth’. Iice cream inogadzirwa maererano nekamukira uye zvigadzirwa zvinotengeswa kubva kuItaly, saka zvakanyanya kufanana neGelato ice cream. Nekuda kweizvozvo, pakudya, hapana kunzwa kwekuruma semamwe ma ice cream. Kusiyana neizvi, muchero, mafuta, muchero mutsva unonaka unonaka.
Ice cream inouya mune zvakawanda zvakasiyana. Iwe unogona kusarudza kusanganisa zvimwe zvinonaka zve ice cream. Topping iri pearl, kokonati jelly, boka rematumbo, mazambiringa akaomeswa. Kana zvasvika pakudya, mhando yacho ndeyechokwadi.
Kunyanya, chitoro chine kokonati ice cream ye60K muchero. Chikamu cheaizikirimu chinosanganisira kokonati diki ine 3 ice cream mabhora ane 3 akasiyana flavour. Pamazuva anopisa ezhizha, Coco Deli ichitoro chinonaka cheaizikirimu muSaigon chaunofanira kushanyira.
6. FUWAGORI Cotton Cream
Kero: 349 D5 Street, Ward 25, Dunhu reBinh Thanh, Guta. Ho Chi Minh Guta
Maawa ebhizinesi: 13:30 – 21:30
Reference mutengo: 35,000 VND
Fuwagori cotton ice cream ishopu itsva yeaizikirimu, asi yakagamuchira rudo rukuru kubva kune vechidiki. Chitoro chine mapazi maviri. Nzvimbo yacho yakakura, matafura nezvigaro zvakarongwa pauriri hwepasi uye terrace. Kunyanya pauriri hwepamusoro, panowanzova nemaonero akanaka kwazvo uye mhepo ine mhepo inotonhorera. Iyi ice cream shopu yakanyatsokodzera kune avo vanoda kurarama ‘virtual’.
Zvimwe zvinonaka zveaizikirimu zvinonaka zvaunofanira kuedza kuchitoro ndezveOrange, milo uye shiratama ice cream. Kirimu ine kunhuhwirira kweorenji kwakareruka kunonakidza. Pamusoro pane musara wemilo flavoured whipped cream uye super rich milo sauce.
Pamusoro pezvo, iyo Hazelnut, Cheese uye Mulberry yakavhenekerwa ice cream inofanirwawo kuyedza. Iice cream iri pazasi haina kunyanya kutapira. Kana inodyiwa, kuravira kunosanganiswa nechesi layer pamusoro, uye sour berry muto wakanyanya kukodzera. Mukuwedzera, kune zvimedu zvepistachio uye zvimedu zvinonaka zvekiki.
Ichi chinonaka uye chakachipa cheSaigon ice cream shopu. Kushandiswa kukuru kweaizikirimu, kuzere kuzere asi 35K chete, saka huya uedze izvozvi.
Kero: 2nd floor – Van Hanh Mall, 11 Su Van Hanh, District 10, Guta. Ho Chi Minh Guta
Maawa ebhizinesi: 9:00 – 22:00
Reference mutengo: 65,000 – 109,000 VND
Swensen’s ishopu yeaizikirimu inonaka muSaigon yakagadzirira kukuunza kutonhorera kunotapira pazuva rezhizha. Aizikirimu yaSwensen inonaka. Iwo mabhora makuru anoyevedza eice cream akasanganiswa nesoso yakazara uye topping anonaka zvakanyanya.
Iwe unogona kusarudza zvako zvaunofarira neanoyevedza toppings uye angangoita makumi matatu emhando dzakasiyana, pamwe ne27 mitsva uye yakasarudzika flavour yeaizi cream. Zvisungo zvekugadzira ice cream zvese 100% zvinounzwa kunze, saka kunaka uye kuravira kunovimbiswa. Zvigadzirwa zvakakwana zvechisikigo, kunyanya zvakagadziriswa kubva mumukaka uye michero ine vitamini-yakawanda, saka yakanakira hutano.
Sticky Chewy Chocolate ice cream zvese zviri zviviri zvinochinjika uye zvizere nechokoreti flavour. Iyo cream inosanganiswawo nechokoreti machipisi izvo zvinonyatso kugutsa kuravira kwako. Kuravira kwekrimu kwakapfuma, kunyunguduka pamuromo werurimi, kunonaka kunofadza.
Pamusoro peaizikirimu, Swensen’s zvakare ine mukurumbira weBingsu. Hazvina mhosva kuti ice cream yakakura uye inonaka sei, Bingsu inonaka zvakaenzana uye inoyevedza. Ichi chikafu chinonaka cheaizikirimu muSaigon icho chokwadi vanoda ice cream vanofanira kuedza kamwe chete.
7. COCO MANGO
Kero: 62Bis Huynh Thuc Khang, Ben Nghe Ward, Dunhu 1, Guta. Ho Chi Minh Guta
Maawa ebhizinesi: 09:00-23:30
Reference mutengo: 40,000 – 55,000 VND
Coco Mango ichitoro chidiki chinonaka cheSaigon aizikirimu chinojairana nevanhu veSaigon. Chitoro ichi chine nzira yakafaranuka, saka kune macheya madiki akawanda ekuti vatengi vagare vachimirira kana vauya kuzotenga. Izvi zvinogadzira kunzwa kugadzikana kuti iwe udye uchikurukura neshamwari. Chitoro chiri pedyo nemugwagwa wevanofamba netsoka, saka nzvimbo yacho inotonhorera uye ine ruzha.
Sechitoro chesmoothie, madhishi eaizikirimu pano akanyanya kunaka. Unogona kuedza zvinhu zvakaita seMango Butter Coconut Cream. Iyo ndiro ine musanganiswa wekunaka weavocado nyowani uye mango nyowani. Kunze kwezvo, coconut cream zvese zvine mafuta uye zvinonaka, saka kuravira kunopindirana. Iyo ice cream inotapira, kwete yakanyanya kutapira.
Imwe inonaka ice cream dish yausingakwanise kupotsa iMango Coconut Cream. Iri ndiro musanganiswa wemango nyowani uye yepakutanga coconut cream, saka zvakare yakanyanya “kufananidza”. Iyo yakapfuma inonhuwira yemango nyowani yakasanganiswa neinonaka ine mafuta ekokonati cream. Kunze kwekokonati ice cream, unogona kusarudza yogati ice cream kuti uedze zvimwe zvinonaka.
Zvokudya zvese zvinonaka zvenguva dzose uye hazvina kunyanya kutapira. Chitoro chinonyanyo tengesa takeaway chete. Unogona kushanyira kunotenga uye wozofamba kuti unakirwe. Kana kugara uye kunakidzwa nekunze kwekutonhora kwemhepo zvakare kwakanyanya.
8. Bui Vien Coconut Sticky Ice Cream
Kero: 103 Bui Vien, West Hamlet, Pham Ngu Lao, Dunhu 1, Guta. HCM.
Maawa ebhizinesi: 18:00 – 24:00
Reference mutengo: 20,000 – 35,000 VND
Ice cream chikafu chakajairika, asi Coconut Sticky Rice Cream zvirokwazvo ichaita kuti vazhinji vako vayemure nekuda kwekukatyamadza uye kunaka kwayo. Coconut inonamira mupunga ice cream Bui Vien ndiyo yekutanga inonaka ice cream shopu muSaigon ine kokonati inonamira mupunga ice cream. Kana iwe uri wechikwata chinoda ice cream, haufanirwe kupotsa iyi yakanaka ice cream shopu.
Ice cream pano inotsvedza, ine mafuta, yakapfava uye inonhuhwirira. Kuravira kweaizikirimu kuno kunoshamisa, saka unogona kunge uine yako resipi uye zvigadzirwa zvekugadzira ice cream. Chinhu chakakosha chekudya ichi chiri mumupunga unotapira uye unonamira. Kunhuhwirira kwakanaka kwemupunga unonamira wakasanganiswa nekutapira kweaizikirimu kunonakidza zvikuru. Imwe neimwe ice cream ine chikamu chayo chemvura yekokonati. Mvura yekokonati yakasanganiswa neaizikirimu inonamira iyi inotonhorera zvakare. Pamusoro peaizikirimu, kune zvakare yakazara toppings senge coconut mupunga, nzungu, deiccated kokonati uye coconut jelly.
Kunze kweaizikirimu, chitoro ichi chinewo zvimwe zvidya zvakaita sekeke rehurongwa kana miriwo yeareca, bingsu, uye muchero wakabikwa. Zvakare, iyo yechinyakare kokonati inonamira mupunga ice cream inokwidziridzwa kuita akawanda akasiyana ‘shanduro’ senge flan coconut inonamira mupunga ice cream, coconut nuggets ice cream.
Heano mazano masere e Saigon inonaka ice cream shopu kuti unofanira kushanyira. Ndinovimba kuti mazano kubva kuDigiticket achakubatsira iwe kuva nekudya kwakanaka kwezhizha.
Kupa zano ndiro rinonaka kwazvo muSaigon harifanirwe kupotsa zhizha rino:
READ Gợi ý những nhà hàng ăn buffet ngon, nổi tiếng nhất ở Hà Nội | Excitinghochiminhcity
← Khắc phục mạng 4G yếu đơn giản với 7 cách | Excitinghochiminhcity
TOP quán ngan ngon ở Hà Nội đắt khách nhất hiện nay | Excitinghochiminhcity →